Huawei फोन क्लोन स्थानान्तरण डाटा र नयाँ स्मार्टफोन Files Emulator.online ▷ Files मा फाइल
के तपाइँले एक नयाँ स्मार्टफोन किन्नुभयो र अब तपाइँ तपाइँको पुरानो मोबाइलबाट तपाइँको सबै डेटा तपाइँको नयाँमा ट्रान्सफर गर्न चाहानुहुन्छ? समाधान छ Huawei फोन क्लोन, प्रख्यात चिनियाँ कम्पनी द्वारा विकसित एक अनुप्रयोग, पूर्ण, बहु प्लेटफार्म र एन्ड्रोइड र आईफोन दुबै संग उपयुक्त।
आईफोनबाट नयाँ एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा स्विच गर्नेहरूका लागि यो अनुप्रयोग एकदम सुविधाजनक छ र सबै भन्दा माथि, उनीहरूले आफ्नो हुवाइ फोनलाई अर्को ब्रान्डमा परिवर्तन गर्नेहरूको लागि (आज हुवावे फोनहरू निश्चित रूपमा थोरै बिकास भन्दा पहिले पनि बेच्दछन्)।
साथै पढ्नुहोस्:एउटा Android मोबाइलबाट अर्कोमा स्वचालित रूपमा डेटा स्थानान्तरण गर्नुहोस्
con Huawei फोन क्लोन यो सम्भव छ:
बाट डाटा ट्रान्सफर गर्नुहोस् आईफोन/आईप्याड एक स्मार्टफोन Huawei र यसको विपरित;
बाट डाटा ट्रान्सफर गर्नुहोस् आईफोन/आईप्याड एक स्मार्टफोन Android र यसको विपरित;
स्मार्टफोनबाट डाटा ट्रान्सफर गर्नुहोस् Android एक स्मार्टफोन Huawei र यसको विपरित;
स्मार्टफोन बीच डाटा हस्तान्तरण Huawei.
स्थानान्तरण योग्य फाईलहरू र डाटा
yo डेटा जुन मार्फत सार्न सकिन्छ फोन क्लोन तिनीहरू निम्न हुन्:
सुरक्षा कारणका लागि द्वारा लगाइएको Android त्यहाँ डाटा छन् कि no स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ:
अनुप्रयोगबाट डेटा जस्तै व्हाट्सएप;
क्लाउडमा डाटा: उदाहरणका लागि, गुगल फोटोहरूमा फोटोहरू बचत गरियो;
फोन क्लोनको साथ डाटा ट्रान्सफर कसरी गर्ने
१) पहिले तपाईलाई नि: शुल्क अनुप्रयोग स्थापना गर्नु पर्छ फोन क्लोन दुबै उपकरणहरूमा। यदि स्मार्टफोन दुबै हो Huawei तपाईंले पहिल्यै स्थापना गरिएको अनुप्रयोग पाउनुहुनेछ।
२) एक पटक अनुप्रयोग डाउनलोड भए पछि, ती दुबै उपकरणहरूमा खोल्नुपर्नेछ र क्लिक गर्नुपर्नेछ "स्वीकार गर्न" तल दायाँ;
)) दुबै उपकरणहरूमा, पुष्टिकरण तपाईंको डाटा पहुँच गर्न सक्षम हुन;
)) तपाइँले तपाइँको पुरानो स्मार्टफोनमा एक पटक सहमति दिएपछि, क्यामेरा तपाइँलाई फ्रेम गर्नको लागि सोधेर खुल्नेछ QR कोडनयाँ स्मार्टफोनमा तपाईले पुरानो फोन प्रकार बीचको छनौट गर्नुपर्नेछ "Huawei", "अर्को एन्ड्रोइड", "iPhome / iPad"। सहि चयन गर्नुहोस् र QR कोड.
)) पुरानो स्मार्टफोनको साथ, फ्रेम गर्नुहोस् QR कोड: यहाँबाट दुई उपकरणहरू बीचको जडान प्रयास सुरु हुन्छ, त्यसपछि पुष्टिकरण पप-अप विन्डो मार्फत प्रयोगकर्ता द्वारा जडान।
)) अब तपाइँ पुरानो स्मार्टफोनबाट कुन फाईलहरू स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर संकेत गर्न सक्नुहुन्छ "देखा पर्दै"एक व्यक्ति जो तपाईलाई चासो दिन्छन्।
)) प्रेस गर्नुहोस् "पुष्टिकरण" र डाटा माइग्रेसन प्रक्रिया स्वचालित रूपमा सुरु हुनेछ।
डाटा ट्रान्सफर प्रकारको लिंक मार्फत गरिन्छ वाइफाइ सिर्जना गरियो यो गर्न दुई उपकरणहरू बीच: यो तरीकाले प्रक्रिया हुनेछ ला seguridad mi छिटो.
यदि तपाईंसँग धेरै डाटा छन् भने माइग्रेसनले केहि मिनेट लिन सक्दछ, तर बाँकी समय सूचक अझै पनि पर्दामा देखा पर्नेछ। यदि स्मार्टफोन बीचको जडान अवरोध भयो भने, प्रक्रिया दोहोर्याइनेछ र स्थानान्तरण फेरि सुरु हुनेछ जहाँबाट यो बन्द भयो।
साथै पढ्नुहोस्: एन्ड्रोइडबाट आईफोनमा स्विच गर्नुहोस् र सबै डाटा ट्रान्सफर गर्नुहोस्